Almost 100 euros dhisikaundi pakutenga kwako MacBook Air M1 | Ndinobva mac
Almost 100 euros dhisikaundi pakutenga kwako MacBook Air M1
Uye ndezvekuti kana nezuro takagovana nemi mose chipo chinonakidza pane sarudzo yekutenga Nhepfenyuro dzeApple 6Nhasi tinoda kugovana chimwe chezvinhu zvinonakidza izvo zvatinowana muAmazon online chitoro. Zviri nezve zvese MacBook Air ine M1 processor chii chine dhisikaundi yechinhu chimwezve uye hapana chakaderera pane makumi matanhatu emamiriyoni nezve mutengo wayo wepamutemo muchitoro cheApple.
Zvinogona kutaridzika semari shoma yemari kana isu tave kuda kushandisa chaiko mari yemwedzi yemubhadharo wevanhu vazhinji vanoshanda pakombuta, asi idzi mhando dzezvishoma hadziwanzo kuwanda uye isu tinofanirwa kutora mukana wavo.
Tenga pano yako MacBook Air ne M1 processor ine inodhura ne10%
Isu tese tatoziva ruzivo rweApple's nyowani MacBook Air ine ARM-based processor uye kuderedzwa uku kungave kwenzvimbo yegrey modhi. Mamwe ese marondedzero kana chakatanhamara chemidziyo iyi ndiwo 8 GB RAM, 256 GB SSD kuzvionera kusvika maawa gumi nemasere kana iyo Eight-core CPU inopa mashandiro anokwana kuita 3,5 nguva dzakakwira kupfuura iyo yapfuura modhi.
Zvinonzwisisika kuti mutengo uyu weMacBook Air haugare uchishanda saka inogona kunge iri nguva yakanaka yekusvetukira kana iwe wanga uchifunga kuchinjira kumaMacs matsva aya.Hapana zvimwe zvakawanda zvatinogona kutaura pamusoro pemutengo wemidziyo iyi mu Chitoro cheAmazon kana nezve zvakatemwa uye mashandiro eiyo izvo zvisati zvataurwa. Izvo pasina mubvunzo imwe yeakanakisa MacBook Mhepo yenguva dzese uye ikozvino unogona kuwana uyu mutengo wakaderedzwa pamusoro peiyo yepamutemo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » MacBook Air » Almost 100 euros dhisikaundi pakutenga kwako MacBook Air M1
Mashandisiro ekushandisa Memoji pane yako Mac
Nyowani vhezheni yeMactracker app inowanikwa